Nchekwaala | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Nchekwa onwe
Enwere m ike ịme OsAGO maka 1 otu ọnwa? Ma ọ bụ, biko, ma ọ bụ oge kachasị oke
Enwere m ike ịme CTP maka ọnwa 1? Biko gwa m. Ma ọ bụ obere oge dị mkpirikpi. Oge kacha nta - ruo ụbọchị 20 maka mkpuchi mkpuchi (na-eri 20% nke ụgwọ nke amụma kwa afọ). Naanị ...
Ọ dị iwu ime OsAGO na traktị na ngwá ọrụ ugbo ndị ọzọ?
Ọ dị iwu ime OsAGO na traktị na ngwá ọrụ ugbo ndị ọzọ? A chọrọ iwu mkpuchi mmanye nyere iwu. Enweghị osAGO agaghị edebanye aha na nyocha nke ụgbọ ala ala. Mee mkpuchi maka ọnwa 3, ...
Kedu oge ọ ga-eji nyefee ụlọ ọrụ inshọransị akwụkwọ maka emebi maka OsAGO?
Kedu oge a ga-ewe iwebata akwụkwọ maka ụlọ ọrụ inshọransị ma ọ bụrụ na mkpuchi CTP? gụọ nkwekọrịta dịka m chetara na ọ bụ ụbọchị 5 dịka m chetara - ụbọchị ọrụ 15 site na ihe mberede ahụ,…
Iji laghachi ego OsAGO n'ezie?
Ọ bụ ihe ezi uche dị na iweghachite ego maka mkpuchi mmanye moto? Naanị ihe ha achọghị bụ inyeghachi gị ego ahụ ... ha na-ewelite isi gị !! ! aghaghi ịlaghachi n'oge azụtara na ire. Aka enyemaka zuru ezu. na n'ọnọdụ m, enwetara m kaadị Rosgostrakh ...
Kedu ka esi akpọ obodo Tver?
Kedu ka esi akpọ obodo Tver? Kalinin, agara m na klas nke 1 KALININ, mana na Tver bụ Tver ... Tver (na 19311990, Kali # 769; nin) bu obodo na Russia, nke di na ...
Ebee ka ịzụta OsAGO online? Agara m Rosgosstrakh, ebe a na-eduzi ọrụ ebighi ebi, RESO anaghị arụ ọrụ.
Ebee ka ịzụta OsAGO online? Agara m Rosgosstrakh, ebe a na-eduzi ọrụ ebighi ebi, RESO anaghị arụ ọrụ. Xs CO gas anaghị arụ ọrụ kwa? Kamumaff Insurance bụ nke a na onye ọ bụla.
Na Moscow, ole ka ọdụ ụgbọelu dị? Na dị ka a na-akpọ ha?
Na Moscow, ole ka ọdụ ụgbọelu dị? Na dị ka a na-akpọ ha? 4-Vnukovo, Bykovo, Sheremetyevo, Domodedovo. Kemgbe 20 June 2016 afọ, ọrụ nke ọdụ ụgbọ elu mba Zhukovsky, na ụyọkọ agha: Monino, Kubinka, Zhukovsky. Na ...
Enwere ike ịdebanye ụgbọ ala na-enweghị mkpuchi? Ndị uweojii agaghị achọpụta maka nke a?
Enwere ike ịdebanye ụgbọ ala na-enweghị mkpuchi? Ndị uweojii agaghị achọpụta maka nke a? Ịzụta akwụkwọ kaadị nyocha (nlezianya nyocha) Nyocha akwụkwọ nyocha Online Anyị anọwo na-arụ ọrụ nile na Russia maka ihe karịrị afọ abụọ na ...
Enwere m ike ịme mkpuchi maka ụgbọ ala na-enweghị onye nwe ya?
Enwere m ike ịme mkpuchi maka ụgbọ ala na-enweghị onye nwe ya? Mba, n'enweghị onye ọka iwu, a gaghị enye gị mkpuchi. Ọ ga-ekwe omume ime ihe niile n'emeghị onye nwe ụlọ ọrụ ahụ naanị dabere na ike onye ọka iwu. Enweghị nsogbu. Ọ ga-adabara na ...
Onu ogugu di iche iche ka nọmba nke AAA nyere? Ego ole ha bụ? Biko biko .... Ekele
Kedu ikike ndị Nọmba AAA na-enye? Ego ole ka ha na-eri? Kpọrọ ihe, biko .... daalụ, dabere na ebe, ọ bụrụ na G. Vyborg, mgbe ahụ gbasara mkpokọta 20-30 p. mana anaghị m echekwa iwere A *** AA ka mma iwere ndị na-acha ọbara ọbara ...
Kedu otu ike nke ọka iwu maka ụgbọ ala? Kedukwa ikike onye nwere maka igwe a?
Kedu otu ike nke ọka iwu maka ụgbọ ala? Kedukwa ikike onye nwere maka igwe a? ugbua enweghi ihe di otua ka ekwenye gi! ike zuru oke nke ọkàiwu ma ọ bụ notarized, dị ka echiche ...
wee banye n'ihe mberede ... bụ ụlọikpe, ghọtara na otu mmebi iwu. onye ga-akwụ ụgwọ ahụ?
wee banye n'ihe mberede ... bụ ụlọikpe, ghọtara na otu mmebi iwu. onye ga-akwụ ụgwọ ahụ? Ọ bụrụ na enwere ikpe mara nke ndị ọkwọ ụgbọala, 50% nke mmebi kpatara ụgbọala ahụ ga-akwụ ụgwọ na ihe kpatara ụgwọ ego. Maka ...
CTP gbatịpụrụ - gịnị ka ọ bụ?
CTP gbatịrị - gịnị ka ọ bụ? ọ bụrụ na ọghọm ahụ bụ ihe ọjọọ gị na njedebe na ịkwụ ụgwọ 120t karịrị. r , mgbe ahụ ịkwụ ụgwọ ihe dị iche abụghị n’akpa uwe. kama site na ndọtị ahụ. M nye ndụmọdụ, ọ dị mma…
Ingosstrakh kwadoro ịkwụ ụgwọ nke OSAGO
Ingosstrakh na-eleda ugwo CTP anya.nwere ike inweta ego, mana inwere onwe gi kpọtụrụ tyagomotin nke ikpe bụ ọrụ enweghị ekele. Enwewo m ụdị ahụmịhe ahụ, achọghịzi m ikwughachi ọzọ.
Gwa m otu nchịkọta nke ike nwere ike iji aka gị dee akwụkwọ iji kwado ya
Gwa m ihe atụ nke obere akwụkwọ edemede edere ede ka m wee dabaa na mkpuchi CTP .chọghị ikike ọka iwu iji dabara na mkpuchi ahụ. Onye nwe ya ga-ede ya. Agara m na Yandex wee dee “ihe nlere anya dị mfe iji dee akwụkwọ ikike…
ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nweghị mkpuchi ụgbọ ala
ihe dị mma ma ọ bụrụ na ị nweghị mkpuchi maka ụgbọ ala ahụ bụ 800r na nkwụsị ọ bụla ị na-ekwu na ọ ka mma ịbụ onye na-agagharị agagharị) Ọkwọ ụgbọala gị bụ ndị ọrịa. Metro TV ị nwere ike izute ụmụ agbọghọ iji gụọ kntgrossdam ...
Kedu ihe bụ iwu DGO, gịnịkwa ka ọ bụ?
Gịnị bụ usoro iwu DGO, gịnịkwa mere o ji dị mkpa? DGO bụ ndọtị nke ikike ịkwụ ụgwọ maka CTP, ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa ịkwụ ụgwọ n'ihi mmejọ gị site na 140 puku…
Ònye mere nnyocha nyocha onwe ya mgbe ihe mberede ahụ gasịrị?
Ònye mere nnyocha nyocha onwe ya mgbe ihe mberede ahụ gasịrị? Ugbu a, enweghi nsogbu na nke a. Ụlọikpe na-eguzo n'akụkụ ndị ahụ metụtara ma weghachite site na ịkwụ ụgwọ mkpuchi, wepụ na ihe ndị ọzọ dị ụtọ ....
Ego ole ka ọ na-efu iji hụ na mmadụ na-eme ka mmadụ sie ike?
Ego ole ka ọ na-efu iji hụ na mmadụ na-eme ka mmadụ sie ike? na-adabere ọ bụghị naanị na agadi, kamakwa na ịnyịnya, na propiska ekwesịghị iwere ma ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala ahụ na ahụmahụ ya na ndị ọnụ ahịa ya bụ ...
ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-ere ụgbọ ala ị dere nkwekọrịta maka ịzụta ire ahịa, ihe ịrịba ama maka pts,
ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-ere ụgbọ ala ị dere nkwekọrịta banyere ịzụta ere ahịa, ihe ịrịba ama maka pts, Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ere. 1. Ị bịanyere aka na nkwekọrịta nke ire ụgbọ ahụ na 3 mbipụta, otu gị, na abụọ maka onye zụrụ ya.
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,417.